Izibonelelo ezili-10 zokunyaniseka kwabaThengi kunye neNkqubo yeMivuzo | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 24, 2020 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 24, 2020 Douglas Karr
Ngekamva lezoqoqosho elingaqinisekanga, kubalulekile ukuba amashishini agxile kugcino lwabathengi ngamava akhethekileyo abathengi kunye nembuyekezo yokunyaniseka. Ndisebenza nenkonzo yokuhanjiswa kokutya kwengingqi kunye nenkqubo yemivuzo abayenzileyo iyaqhubeka nokugcina abathengi bebuya ngaphezulu.
Izibalo zokunyaniseka kwabaThengi
Ngokwe-Experiep's Whitepaper, Ukwakha Ukunyaniseka kweBrand kwiLizwe leNqamlezo:
Iipesenti ezingama-34 zabantu base-US banokuchazwa njengabanyanisekileyo bohlobo
I-80% yabathengi abanyanisekileyo bebango abathengisi ii-brand ezingaziwayo ukugcina imali
Ukunyaniseka kwamkela izimvo ezintsha kwaye uphendule ngazo Phinda kabini intengiselwano kumaphulo agxininisa izibonelelo zenkqubo entsha yokunyaniseka
Ukunyaniseka kubonelela amaxabiso aphezulu kakhulu okucofa kuphando kunye nokuphononongwa kwezicelo, kunye nezimemo zokuba ngumlandeli wohlobo lophawu kwiindawo zosasazo zasekuhlaleni
Kuyaphazamisa ukuba iinkampani ezininzi zibonelela ngezaphulelo kubathengi abasandula ukufunyanwa kwaye bangabahoyi abathengi abahlala bethembekile kwaye banefuthe elikhulu kwinkampani. Izibonelelo zenkqubo yokuvuza yokunyaniseka ziyaqinisekiswa:
Iipesenti ezingama-75 zeenkampani zase-US ezineenkqubo zokunyaniseka zenza imbuyekezo kutyalo-mali. Esi sesona sibonelelo sibaluleke kakhulu kumashishini abatyala imali kwiidola zabo kwiinkqubo zokunyaniseka.
Le infographic evela eZinrelo, Izibonelelo ezili-10 eziphezulu zeNkqubo yokuFumana iMivuzo, ibonisa izibonelelo zenkqubo yokuvuza yokunyaniseka:
Qhuba ukuthengisa kwakhona - oku kufezekiswa ngokubonelela ngemivuzo kuhlobo ngalunye lomsebenzi, kubandakanya ukwenziwa kweakhawunti, ukubhaliswa kwe-imeyile, imidiya yoluntu elandelayo, ukulayishwa kweefoto, ukuthunyelwa, njl njl.
Yandisa ixabiso le-oda yomndilili -Abathengi abathembekileyo bathenga rhoqo kwaye bachitha ngaphezulu kwintengiselwano nganye.
Iindleko zokuThengwa kwabaThengi ezisezantsi - Yongeza ukuhanjiswa kwinkqubo yakho yemivuzo ukuze abathengi bakho basasaze igama kwiimveliso nakwiinkonzo zakho. Iingcebiso zomlomo zomlomo zithwala ubunzima beetoni kunye nabathengi.
Ukuphucula ukunamathela kukhuphiswano -Ukuba umthengi wakho unemivuzo egciniweyo, akuthandabuzeki ukuba bazakulushiya uphawu lwakho… nokuba umntu okhuphisana naye akabizi mali ininzi.
Ukunciphisa izaphulelo kubaThengi -Uneemveliso ekufuneka uzihambisile? Endaweni yokuba ubaphucule ngokunyanisekileyo kuwo wonke umntu, nikezela ngenketho ephezulu kubathengi abathembekileyo endaweni yoko.
Yandisa amaxabiso okuGuqulwa -Bonisa inani lamanqaku aya kuzuzwa ngabathengi ngeenqwelo zabo zangoku… kwaye banokuchitha ngaphezulu ukufumana amanqaku amaninzi.
Ukuphembelela uKhetho lweMveliso -Sebenzisa umphindisi ukwenza iimveliso eziphezulu zomda ezifikeleleke ngakumbi kubathengi bakho abathembekileyo.
Yakha iiProfayile zoMsebenzisi eziTyebileyo -Udinga ulwazi oluthe kratya kwicandelo elingcono kwaye wenze ngokwezifiso unxibelelwano lwakho lokuthengisa? Nikezela ngamanqaku omvuzo wokugqitywa kweprofayili kunye nokufumana ukuskena kokuthenga ngaphandle kweintanethi.
Yandisa Umxholo oveliswe ngumsebenzisi -Umvuzo wabathengi ngokubhala uphononongo, ukuphendula imibuzo, kunye nokulayisha iifoto.
Yandisa ukuthatha inxaxheba kwiMithombo yeendaba -Nika abasebenzisi amanqaku athembekileyo ekwabelaneni ngokwasentlalweni kunye nokukhuthaza.
IZinrelo ikwabonelela ngeendlela ezithile ekubaleni ukusebenza kwesicwangciso ngasinye somvuzo kwi-infographic yabo.
IZinrelo ibonelela ngemihla yanamhlanje, iqonga imivuzo ukunyaniseka eyandisa intengiso ephindwayo kunye nengeniso yomthengi ngamnye ngokuzibandakanya kwabathengi nge-360-degree. I-Zinrelo ikhuthaza imilinganiselo emininzi yokunyaniseka kubandakanya intengiselwano, intlalontle, ukuhanjiswa, ukuzibandakanya kunye nokunyaniseka kokuziphatha. Ixhasa ukuthunyelwa kwesitishi se-omni esikwi-desktop, kwiivenkile zeselfowuni kunye nezomzimba.
tags: ukufunyanwa kwabathengiiindleko zokufumana abathengiukunyaniseka kwabathengiiqonga ukuthembeka abathengimanani ukuthembeka abathengiumvuzo wabathengiiqonga lemivuzo yabathengiisaphuleloyonyusa umndilili wexabiso le-odoloiindleko zokufumana abathengi ezisezantsiiqonga imivuzo ukunyanisekaInkqubo yembuyekezoukunamathelaiinkangeleko zomsebenzisiilizwi lomlomozinrelo
Yintoni iOrchestration yoThengiso?